Moduleyaasha Kaameeradda ee Zoom IP
Qeybaha Zoom 4K
4MP Modules Zoom
2MP Modules Zoom
Zoom -ka Dheer ee Dheer
Zoom Dheer ee Dheer ee Pro
Zoom -ka caadiga ah
Qaybaha Kaamerada Dijital Dijital ah
Zoom caadi ah
Cutubyada Kaamirada Zoom ee Drone
Qaybaha Kaamerada Kuleylka
Moduleyaasha Kuleylka ee Sensor
1280 Qaybaha Kuleylka
640 Module -kuleyl
384 Module -yada Kuleylka
Kaamirooyinka Gimbal ee Drone
Nidaamyada Meelaynta Bi-Spectrum
Dome PTZ Kaamerooyinka
UAV/Drone modules camera block block
View Sheen wuxuu sameeyay kamarad xannibaad zoom gaar ahaan UAV ama drone. Waa maxay farqiga u dhexeeya moduleka zoom zoom camera iyo zoom block camera ee CCTV? 1. Si loo yareeyo daahitaanka fiidiyaha, 1080p UAV moduleka kaamerada xannibaadda wuxuu u qalabaysan yahay heerka caadiga ah ee 1080P@50fps/60fps. Tani waxaan ...
Isbarbardhigga u dhexeeya zoom indhaha iyo zoomka dhijitaalka ah
Moduleka zoom -ka zoom iyo nidaamka kaamerada sawir -qaadista kuleylka ee infrared, waxaa jira laba hab oo zoom, zoom optical iyo zoom digital ah. Labada habba waxay gacan ka geysan karaan ballaarinta walxaha fog marka la kormeerayo. Zoom -ka indhaha ayaa beddelaya goobtii xagasha aragtida isagoo u dhaqaajinaya kooxda muraayadaha gudaha muraayadda, halka zoomka dhijitaalka ah i ...
Qaacidooyinka iyo miisaska kala duwanaanshaha ogaanshaha moodeelka kaamerada sawirka kaamerada
Codsiyada la -socodka meelaha fog -fog sida difaaca xeebaha iyo anti uav, inta badan waxaan la kulannaa dhibaatooyin noocaas ah: haddii aan u baahanno inaan ogaanno 20 km oo dad iyo gaadiid ah, nooca kaameeraha sawir -qaadista kuleylka ah ayaa loo baahan yahay, warqaddani waxay bixin doontaa jawaabta. Nidaamka kamaradaha infrared, heerka fiirinta ee ...
Masaafada la socoshada ee kaameeraha zoom -ka ee kala fog
Codsiyada la -socodka masaafada dheer sida difaaca xeebaha ama UAV -ka, waxaan inta badan la kulannaa dhibaatooyinkan oo kale: haddii aan u baahanno inaan ogaanno UAV -yada, dadka, baabuurta iyo maraakiibta 3 km, 10 km ama 20 km, waa maxay nooca kaameeraha zoomka dhererka foomka waa inuu ahaadaa waxaan isticmaalnaa? Warqadan ayaa ku siin doonta jawaabta. Qaado wakiilkeena ...
Eeg Sheen sii daayay Modules Camera Zoom Ultra Long Range
View Sheen Technology wuxuu sii daayay 3 kamarad xannibaad xad -dhaaf ah oo aad u dheer: 2Megapixel 86x 860mm module camera zoom range range, 4Megapixel 88x 920mm module camera camera oo dheer iyo 2Megapixel 80x 1200mm modul camera zoom. Marka la barbardhigo kaamirooyinka CCTV -ga ee dhaq -dhaqaaqa leh ee masaafada dheer + xalka IPC ...
Adeegsiga kamaradda gimbal-xasilinta 3-dhidibka ee kormeerka waddada UAV
Dhaqan ahaan, kormeerka waddooyinka wuxuu ku salaysan yahay IPC, ITC, Dome iyo qalab kale si loo gaaro kormeerka waqtiga-dhabta ah ee baabuurta. Xalalkan waxaa la isticmaalayay sanado badan oo aad bay u bislaadeen. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la horumarinayo wareegga cusub ee dhismaha macluumaadka waddooyinka, cilladaha a ...
Faa'iidooyinka kaamirooyinka xannibaadda dheereynta ee dhaadheer
Ilaalinta masaafada dheer, habka dhaqameedku waa in la isticmaalo muraayadaha cctv ee baabuurka leh sida Fujifilm iyo IPC. Labadii sano ee la soo dhaafay, iyadoo la adeegsanayo kaameeradda xannibaadda dhererka dheer, suuqa 300mm ~ 500mm waxaa si tartiib tartiib ah u liqday kaameradda xannibaadda, oo leh astaamaha o ...
OIS iyo EIS ee kaamirooyinka xannibaadda
Hordhac Xasilinta kamaradaha ficilka dhijitaalka ah ayaa qaangaadhay, laakiin kuma koobna muraayadda kamaradaha CCTV. Waxaa jira laba waji oo kala duwan si loo yareeyo saamaynta cam-cam. Xasilinta muuqaalka indhaha ayaa adeegsada farsamooyin qalafsan oo qalafsan oo ku jira muraayad si sawirku u ahaado mid taagan oo awood u siinaya qabasho fiiqan. Waa ...
Kamaradaha xannibaadda zoom ee u hoggaansan NDAA
View Sheen wuxuu bixin karaa kaamirooyinka xannibaadda zoom ee u hoggaansan. Hordhac Aragtida Sheen Mstar kaamirooyinka xannibaadda zoom waa 100% waafaqsan NDAA. Haddii aad maqashay liiska madow ee USA ee alaabada sida Hikvision, Dahua iyo Huawei, markaa waxaad u maleyn kartaa inaad fiirineyso kamarad xannibaad zoom ah oo aan ...
Adeegsiga defog elektiroonig ah iyo indhaha ah ee cctv lens zoom fog
Waxaa jira laba nooc oo teknolojiyadda defog ah. Guud ahaan, 770 ~ 390nm iftiin muuqda ma dhex mari karo ceeryaanta, si kastaba ha ahaatee, Infrared wuxuu dhex mari karaa ceeryaanta, maxaa yeelay infrared -ku wuxuu leeyahay mowjado dheer oo ka dheer iftiinka muuqda, oo leh saamayn kala -bax cad. Mabda'aan waa lagu dabaqay i ...
Faa'iidooyinka 4 megapixel module zoom block camera
Qaybta kamaradaha zoom -ka ee xannibaadda ayaa si buuxda ugu gudubta xilligii iftiinka xiddigta ee 4MP. Markay dadku sheegaan kaamirooyinka xannibaadda xiddiglaha, waxay u muuqdaan inay ka fekeraan waxqabadka kamaradaha xannibaadda ee 2MP. Laakiin kor u qaadista iyo sumcadda codsiyada AI, cilladaha 2MP kaamirooyinka iftiinka ayaa noqday ...
Right Copyright - 2016-2021: Dhammaan Reserved Rights.